8 Uru Phenomenal Health Uru Site Iri Mmanụ Olive | Mmanụ Ala?
8 Uru Phenomenal Health Uru Site na Iri Mmanụ Olive
30 / 03 / 2017 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
Olive nwere mmanụ olive? Mmanụ oliv, ọkachasị mmanụ mmanụ olive na-amaghị nwoke, dị ịtụnanya maka ahụ na ụbụrụ! Mmanụ oliv nwere ọtụtụ uru ahụike siri ike na-eme, ị ga-agụkwu maka ebe a. Anyị na-atụ anya na ikwenyesiri ike itinyekwu mmanụ a dị ebube na nri gị. Have nwere ndenye? Jiri igbe nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụ nke anyị Facebook Page - n'ụzọ ọzọ nweere onwe gị ịkekọrịta post ahụ na onye hụrụ mmanụ oliv n'anya.
Akụkọ banyere mmanụ mmanụ
Mmanụ oliv bụ mmanụ nkịtị sitere na mkpụrụ oliv. Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke nri nri Mediterenian ma na-akọkwa mpaghara ndị ahụ ogologo oge, ogologo oge. Spain bụ mba kachasị nwee mmanụ dị otú a, Gris na followedtali sochiri ya.
Iri mmanụ oliv nwere ike igbochi ọrịa strok
A na-ebute ọrịa strok site na enweghị ọbara n'ọbara - ma ọ bụ n'ihi mkpụkọ ọbara ma ọ bụ ọbara ọgbụgba. N'ime mba ndị ka na-emepe emepe, ọrịa strok bụ ihe nke abụọ na-akpata ọnwụ mgbe ọrịa obi gasịrị.
Enyochala njikọ dị n'etiti oriri mmanụ na ihe ize ndụ nke ọrịa strok n'ọtụtụ nnyocha nyocha. Ihe omumu a bu nke edeputara kachasi elu na akwukwo ihe omumu. Ha nọ nchekwa n'ihi ha; Mmanụ oliv na-ebelata ohere ọrịa strok na ọrịa obi (1).
Ọmụmụ ihe ọmụmụ na ndị sonyere 841000 gosipụtara na mmanụ oliv bụ naanị ihe nwere afọ ojuju maka belata ohere ọnya ọnya obi na ọrịa obi (1). Ọmụmụ ihe nyocha nke ndị ọzọ sonyere na 140000 kwubiri na ndị nwere mmanụ olive na nri ha nwere ohere dị ala bekee (2).
Dabere na ọmụmụ ihe ọmụmụ ndị a, enwere ike kwubie na iri mmanụ oliv nwere ike inwe mmetụta dị mma, ogologo oge na mgbochi nke arịa ọbara na ọrịa metụtara obi.
2. Mmanụ oliv nwere ike iwepụ ihe mgbaàmà nke ọrịa rheumatism na ogbu na nkwonkwo
rheumatism bụ nsogbu ahụike a na-ahụkarị na ọtụtụ mgbe na-achọ ụzọ isi belata ihe mgbaàmà na mgbu. Mmanụ oliv nwere ike inyere aka na mgbaàmà n'ihi ọrịa rheumatic. Nke a bụ nnukwu n'ihi na ya mgbochi mkpali Njirimara.
Ọtụtụ nnyocha egosila na mmanụ olive nwere ike belata nrụgide oxidative metụtara ọrịa rheumatism. Ihe nwere ike belata akara nke ụfọdụ ọrịa ogbu na nkwonkwo na nkwonkwo (3). Ejikọtara ya na mmanụ azụ (juputara na Omega-3) a hụla na mmanụ olive nwere ike belata ihe mgbaàmà ọrịa rheumatism. Ọmụmụ ihe jikọtara abụọ ndị a gosiri na ndị sonyere n'ọmụmụ ihe ahụ nwere obere mgbu na-ebelata, ike njigide ha ka mma na erughi ihe na ututu (4).
Gụkwuo: - Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịmara gbasara Rheumatism
3. Mmanụ oliv hụrụbelata ohere nke ọrịa shuga 2
Nnyocha egosila na mmanụ oliv nwere ike igbochi ọrịa shuga (pịnye ụdị ọrịa shuga abụọ). Ọtụtụ nnyocha nyocha egosila na mmanụ olive nwere mmetụta dị mma n'ịchịkwa ọkwa shuga n'ọbara ma gbochie nguzogide insulin (5).
Nnwale na-achịkwa enweghị usoro (RCT) ya na ndị sonyere 418 kwupụtara nchoputa ndị a (6). N'ime ọmụmụ ihe nke ikpeazụ, achọpụtara na nri nri nri nri nke gụnyere nri mmanụ nwere ike belata ohere 2 nke ụdị shuga dị ihe karịrị 40%. Nsonaazụ dị mma!
4. Mmanụ oliv nwere ike igbochi ma belata ohere ọrịa kansa
Ọrịa kansa (gụnyere ọkpụkpụ cancer) bụ ajọ nsogbu nke na - emetụta ọtụtụ mmadụ - ma bụrụ nkewa site na nchịkwa nkewa anaghị achịkwa.
Ihe omumu omumu egosiwo na ndi bi na Mediterenian nwere nsogbu di ala nke udiri oria cancer - otutu ndi nyocha kwenyere na mmanu oliv na aru oru di nkpa. Nchịkọta dị elu nke antioxidants nwere ike belata mmebi nke oxyidative na mkpụrụ ndụ nke kpatara free radicals - nke a kwenyere na ọ bụ otu n'ime isi ihe kpatara mmepe nke kansa (7). Ọtụtụ nyocha in vitro egosila na Mmanụ oliv nwere ike ịlụ ọgụ mkpụrụ ndụ kansa (8).
A choro otutu omumu ihe omumu - ihe omumu mmadu - iji choputa ma ihe oriri na oriri nke mmanu oliv nwere ike buru akuku nke ogwugwo oria ozo, ma enwere otutu nyocha na-akpali akpali na mpaghara nke di nma.
5. Mmanụ oliv nwere ike igbochi ọnya afọ ma chekwaa afọ
Mmanụ oliv nwere afọ ojuju dị elu nke nri bara uru nke nwere ike ịlụ ọgụ nje bacteria na-emerụ ahụ n'ime ahụ ya na ihe ndị na-egbochi nje. A na-akpọ otu n'ime nje ndị a Helicobacter pylori - nje na-ebi n’ime afọ ma nwee ike bute ọnya afọ na ọrịa afọ.
In-vitro ọmụmụ egosila na mmanụ oliv na-amaghị nwoke nwere ike ịlụ ọgụ dị iche iche asatọ nke nje a - gụnyere nje nje atọ na-eguzogide ọgwụ nje (9). Nnyocha nke mmadụ gosipụtara na gram 30 nke mmanụ oliv na-amaghị nwoke kwa ụbọchị maka izu 2 nwere ike ịlụ ọgụ ruo 40% nke ọrịa Helicobacter pylori (10).
6. Mmanụ oliv nwere ike imeziwanye ọrụ ụbụrụ ma gbochie ọrịa Alzheimer
Ọrịa Alzheimer bụ ọrịa na-efekarị neurodegenerative n'ụwa. Nke a bụ n'ihi nwayọ nwayọ na-ewulite ihe edere n'ime mkpụrụ ndụ ụbụrụ - nke ejikọtara ya na mmetọ dị elu na ikpochapụ ikuku, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Nnyocha ọmụmụ anụmanụ gosipụtara na ihe dị na mmanụ olive nwere ike iwepu ihe dị otú ahụ na sel ụbụrụ (11). Ọmụmụ mmadụ ọzọ kwubiri na nri Mediterranean gụnyere mmanụ olive nwere mmetụta dị mma na ọrụ ụbụrụ (12).
7. Mmanụ oliv nwere ọtụtụ antioxidants
Mmanụ oliv ọzọ na-amaghị nwoke nwere ọtụtụ ezigbo nri - dị ka antioxidants na vitamin. Antioxidants nwere ike ịlụ ọgụ mmeghachi omume mbufụt (na n'otu ụzọ ahụ dị ka Ibuprofen) ma gbochie oxidation nke cholesterol n'ime ọbara - nke n'aka nke ya nwere ike ibute ihe ize ndụ nke ọrịa obi (13).
8. Mmanụ oliv nwere ike ichebe onwe ya pụọ ​​na ọrịa obi
Ọrịa obi bụ ihe kacha akpata ọnwụ. Ọnọdụ ọbara dị ala na-adịghị ala ala bụ otu n'ime ihe ndị kachasị dị ize ndụ maka ọrịa obi na ọnwụ ọnwụ.
Nnukwu nnyocha egosila na iri mmanụ oliv n’ime nri n’osimiri Mediterenian na-ebelata ohere ọrịa obi (1). Nchoputa egosiputala na mmanu oliv nwere ike wedata mkpa mmanye obara na-ahazi ogwu ihe ruru 48% (14).
Họrọ ụdị mmanụ mmanụ ziri ezi!
Ọ dị mkpa na ịhọrọ ụdị mmanụ mmanụ dị mma; ya bu mmanu oliv na-amaghi nwoke. Nke a bụ ihe edozighi emezi, agwaghị ya, ọ bụghị ikpo ọkụ ka a na-agwọ ma yabụ nwere ezi nri niile.
O nwere ike ịbụ na mmanụ oliv kachasị mma. Ndị a bụ uru ahụike isii na-atọ ụtọ, na-akwado nkwado nyocha (yabụ ị nwere ike ịrụ ụka karịa Besserwizzer kacha njọ ị maara!), Yabụ ị nwere ike ikwenye na ị ga-eri obere mmanụ oliv na nri gị? Anyị ga-achọ ịnụ gị na ibe Facebook anyị ma ọ bụrụ na ị nwere nkwupụta banyere ụzọ mmetụta ndị ọzọ dị mma.
Ngwaahịa dị mkpa - mmanụ oliv na-amaghị nwoke:
ỌG REGAD AKW :KWỌ: - Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Mgbu Mgbu!
NEW: - Ugbu a ị nwere ike jụọ ajụjụ ozugbo na chiropractor anyị sonyere!
Ọzọkwa gụ: - Uru dị egwu nke iri ginger
Enwere ike ịkekọrịta isiokwu a na ndị ọrụ ibe, ndị enyi na ndị enyi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ mmega ahụ ma ọ bụ edemede ezitere dị ka dọkụmentị nwere ugboro ugboro na ihe ndị yiri ya, anyị na-ajụ gị dị ka ma banye site na Facebook inweta ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, naanị nye ya aka kpọtụrụ anyị - mgbe ahụ anyị ga-aza gị otu anyị nwere ike, kpam kpam n'efu. Ma obughi na i nweere onwe anyi ihu nke anyi YouTube ọwa maka ọtụtụ atụmatụ na omume.
(Anyị na-agba mbọ ịzaghachi ozi niile na ajụjụ niile n’ime awa iri abụọ na anọ)
Foto: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos, Pexels.com, Pixabay na ntinye aka onye na-agụ ya.
Isi mmalite / nyocha
1. WHO - Healthtù Ahụ Ike Worldwa - Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ
2. Schwingshackl et al., 2014. Monounsaturated fatty acids, mmanụ olive na ọnọdụ ahụike: nyocha usoro na usoro meta-ọmụmụ nke ọmụmụ okwu.
3. Kremer et al., 1990. Mmanụ azụ na-eri nri na mgbakwunye mmanụ olive na ndị ọrịa nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo. Clinical na immunologic mmetụta.
4. Berbert et al., 2005. Mmeju nke mmanụ azụ na mmanụ olive na ndị ọrịa nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo.
5. Kastorini et al, 2009. Etkpụrụ nri na igbochi ụdị ọrịa shuga 2: site na nyocha ruo omume ụlọ ọgwụ; nyochaa usoro.
6. Salas-Salvado et al, 2011. Mbelata na ụdị ọrịa shuga abetesdị nke Abụọ Na Nri Mediterenian.
7. Owen et al., 2004. Olive na mmanụ oliv na mgbochi mgbochi ọrịa kansa.
8. Menendez et al., 2005. Oleic acid, bụ isi mmanụ abụba mmanụ mmanụ, na-ebelata okwu Her-2 / neu (erbB-2) na synergistically na-akwalite uto inhibitory uto nke trastuzumab (Herceptin ™) na mkpụrụ ndụ cancer ara.
9. Romero et al., 2007. Na ọrụ vitro nke polyphenols mmanụ olive megide Helicobacter pylori.
10. Castro et al, 2012 - Nnyocha nke mkpochapụ Helicobacter pylori site na Mmanụ Olive na -amaghị nwoke
11. Abuznait et al, 2013 - Oleocanthal sitere na Olive-Oil Enhances β-Amyloid Nhichapụ dị ka usoro Neuroprotective Neuroprotective megide Ọrịa Alzheimer: Na Vitro na Vivo Studies
12. Martinez et al., 2013 - nri Mediterranean na - eme ka cognition mara mma: a na - ekpebi ikpebi oge a.
13. Beauchamp et al., 2005 - Phytochemistry: ọrụ ibuprofen na mmanụ oliv na-amaghị nwoke.
14. Naska et al, 2004 - Mmanụ oliv, nri Mediterenian, na ọbara mgbali elu: nchọpụta nke Greek European na-achọ Nnyocha Ọrịa Cancer na Nutrition (EPIC)
Ọzọkwa gụ: Etu esi ahapu akwara nsogbu n’olu na ubu!
Ọ masịrị isiokwu anyị? Hapụ ọkwa kpakpando
Kekọrịta post a
Kekọrịta na Twitter
Kekọrịta na Pinterest
Kekọrịta na LinkedIn
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Olivenolje-2.jpg?media=1648573622 450 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2017-03-30 15:27:202021-08-06 09:56:128 Uru Phenomenal Health Uru Site na Iri Mmanụ Olive
5 Omume megide akwara olu na olu na ubu 6 Uru Otu Ahụike Dị Mma Site Na-eri Oatmeal